Xog: Immisa Shil ayeey gaysteen 4-tii Sanno ee la soo dhaafay Ciidamadda AMISOM,? Magdhawse ma ka bixiyeen,? – Hornafrik Media Network
Ciidanka Nabadgalyadda Wadooyinka Xamar ayaa soo bandhigay 4-tii Sanno ee la soo dhaafay Shilalka ay galeen Ciidanka AMISOM, iyo khasaaraha ay gaysteen.
Taliyaha Ciidanka Nabadgalyadda Wadooyinka, Gen Cali Gaab ayaa sheegay in Afar sano gudahood ay Amisom geysteen shan Boqol oo shil oo qaarkood dad ay ku dhinteen, waxa uuna intaa raaciyey in ay jiraan dad badan oo aan wali hellin wax magdhow ah.
Gen Cali Gaab waxa uu sheegay in Shilalka intaasi le’eg oo dhacay inta u dhaxaysay 2011-ka iyo 2015-ka ay intooda badan diideen AMISOM, iyagoo waliba ka cararay goobta ay Shilka ka gaysteen, Wuxuuna ka xusay Ninkii Tagsiilaha ahaa oo ay ku jiireen Hotel Ambasador hortiisa, dabeetana ka carareen, balse ay ku qabteen Gaadiidkii AMISOM ee shilkaasi gaystay Agagaarka Xamar Bile, inkastoo uu ka dhawaajiyay inaysan si sax ah Magdhaw uga bixin dhacdadaasi.
Taliye Cali Gaab waxa uu sheegay in Dhacdadii ugu dambaysay ay Habeen ka hor Gaadiidka AMISOM ku jiireen Mooto Bajaaj Wadada Taleex, isla markaana ay diideen inay aqbalaan dhibka ay gaysteen. Wuxuuna Taliyuhu sheegay in isaga iyo Gudoomiyaha Degmadda ay wada bixiyeen Lacagtii lagu qiimeeyay Khasaaraha gaaray Mootadaasi.
Ugu dambeyntii Taliyaha Taraafikada, Jeneraal Cali gaab waxa uu sheegay in Amisom aysan sharciga dalka ka weyneyn, islamarkaana lagula xisaabtami doono khasaaraha ka dhasha shilalka ay geystaan. isaga oo dhinaca kalana dadka codsaday in aan la siyaasadayn Shilalka ay AMISOM gaystaan.
Waxaa jiray shilal badan oo ay geysteen Gaadiidka Amisom oo sababay dhimashada iyo Dhaawaca dad shacab ah.
Ciidamadda AMISOM oo soo galay Somalia sannadkii 2006-da waxay ku yimaadeen Dalka heshiis uu saxiixday Raiisul Wasaarihii hore ee Somalia, Cali Maxamad Geedi Sannadku markuu ahaa 2005-ta. Waxaana Qodob ka mida Heshiiskaasi uu dhigayaa in Askarigii ka tirsan Ciidanka Nabad Illaalinta ee Fal Dambiyeen ka gaysta Somalia aan lagu Maxkamadayn karin Dalka uu dhibka ka gaystay ee loo celinayo Dalka uu ka yimid.